Amar Sonar Bangla (ny Volamena Bengal) ( Bangla:আমার সোনার বাংলা) dia hira ny 1906 amin'ny mpamoron-kira, sy ny mpamoron-kira Rabindranath Tagore. Ny voalohany 10 andininy niorina tamin'ny taona 1972 tahaka ny hiram-pirenena ao Bangladesh.
Ny teny sonar midika ara-bakiteny hoe 'nanao ny volamena', fa ao ny hira sonar Bangla dia mety azo adika ho toy ny hiram-pirenena ny πολυτιμότητας Bengal, na izay manao momba ny tany an-tsaha talohan ' ny fotoam-pijinjana. Ny hira voasoratra ao 1906 nandritra ny vanim-potoana Bhangabhanga(Bôngobhôngo - tamin'ny 1905, rehefa izany dia nampisaraka ny governemanta britanika ao Bengal, ao amin'ny faritra roa arakaraka ny fivavahana). Ity hira ity, tahaka ny hafa, midera ny firaisan-kina Bengal.
Tononkalo iray hafa ny Tagore (Jana Gana Mana) dia naorina araka ny hiram-pirenena ao India.
Tononkira[hanova | hanova ny fango]
ao ny fiteny Bengal
Hanoratana ao amin'ny teny frantsay
Amar sonar Bangla, Ami tomae bhalobashi.
Ny volamena Bengal, Tiako ianao.
Ary ho an'ny rehetra ny lanitra, Ny rivotra dia manome anao ny feo ao am-poko Toy izany ny sodina.
O ma, Phagune tor amer taolana Ghrane pagol kôre, Mori hae, hae re, O ma, Ôghrane tor bhôra khete Ami ki dekhechhi modhur hashi.
Ao amin'ny lohataona, oh reny ahy, Ny hanitra avy amin'ny saham-boankazony ny manga Izany dia manome ahy tarihan'i fifaliana, Oh, ahoana ny fientanam-po! Ao amin'ny fararano, oh reny ahy, Eo amin'ny tanan-tohatra flowery Na aiza na aiza aho mahita ny mamy tsiky niparitaka.
Ki shobha, ki chhaea handeha, Ki sneho, ki maea handeha, Ki ãchol bichhaeechho Bôţer ampondra, Nodir kule kule!
Endrey, tsara tarehy, zavatra matoatoa va no, Inona ny firaiketam-po sy ny zavatra tamim-pitiavana! Inona ny lamba bemiray nandritra ny efa niely Ny fototry ny hazo bunyan Ary teo amoron ' ny renirano!
Ma, tor mukher bani Amar kane lage, Shudhar môto, Mori hae, hae re, Ma, tor bôdonkhani molin lavaka, Ami nôeon jôle bhashi.
Oh reny ahy, teny avy amin'ny molotra Toy ny mamin'ny voninkazo ny sofiny. Oh, ahoana ny fientanam-po! Raha ny alahelo, oh reny ahy, Niely ny alahelo eo amin'ny tavanao, Ny masoko fenoy ny ranomaso.
Ny hiram-pirenena Bangladesh Archived Desambra 11, 2009 at the Wayback Machine
Andinin-teny ao amin'ny baiboly Bengal
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Amar_Shonar_Bangla&oldid=1015367"
Voaova farany tamin'ny 11 Aogositra 2021 amin'ny 14:13 ity pejy ity.